Karazana fizotran'ny milina fanampiny - PTJ Shop
Home > Services > Fomba fanampiny
PROSESY FAMPIANARANA TSY MISY INDRINDRA AO CHINA
Tsotra sy sarotra amin'ny karazana masinina fanampiny.
Ny milina dia misy amin'ny dingana maro samihafa izay manapaka ny sombin-kaontena amin'ny endrika sy habe farany irina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanesorana fitaovana voafehy. Makà teny nalaina ho an'ny famolavolana anao izao na ampiasao ny rindrambaiko CAD maimaim-poana handrafetana, hanomezana vidiny ary hanafarana ny faritra. Nandritra ny famokarana ny ampahany, ilaina ny fikirakira ny milina isan-karazany sy ny dingana hanesorana ireo fitaovana be loatra.
Manome serivisy fanamboarana fifanarahana anatiny sy manerantany ho an'ny OEM manerantany. Manokana amin'ny milina, noforonina, nasiana tombo-kase & ampifangaroina amina singa & fivoriambe. Fanohanana ny injenieran'ny serivisy sy fitantanana tetikasa. Ny fahaiza-manao dia misy ny fikosoham-bary miorina amin'ny CNC, ny fihodinan'ny CNC, ny fanapahana laser, ny famelezana ny CNC, ny famolavolana ny CNC, ny asan'ny milina visy, ny fitombenany, ny vovoka (metallurgy vovoka) & welding robotic sns.
Rindrambaiko: Pro-E®, Solid Works®, Auto-Cad®, Microsoft® Project, & Made2Manage®.
Makà teny nalaina ho an'ny volanao izao na ampiasao ny rindrambaiko CAD maimaimpoana handrafetana, vidiny ary hanafarana ny faritra misy anao.
Contact ny Masinina mandroso masinista anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo faritra sarotra aminao.
Hijery antsipirihany >> Hijery antsipirihany >> 1